Terms & Conditions | Fiainana manokana-General Corporate Services Companies Inc.
Mitantana ny raharaham-barotra
Antsoy ny fotoana 24 / 7 1-888-444-4812
Fampandrosoana ny orinasa sy ny fiantohana ny fiarovana ny tena manokana.
FITANTANANA SY ASA
Ireo fepetra ireo dia mifehy ny fampiasanao an'ity tranonkala ity; Amin'ny fampiasana an'ity tranonkala ity, dia manaiky ireo fepetra sy fepetra feno ianao. Raha tsy miombona amin'ireo fepetra sy fepetra na fe-potoana misy ireo fepetra ireo ianao, dia tsy tokony hampiasa ity vohikala ity.
Tokony ho farafahakeliny 18 taona ianao hampiasa ity tranonkala ity. Amin'ny fampiasana an'ity tranonkala ity sy amin'ny fanekeny ireo fepetra sy fepetra azonao ary maneho fa ianao dia fara fahakeliny 18 taona.
Ity tranonkala ity dia mampiasa cookies. Amin'ny fampiasana an'ity tranonkala ity sy ny fanekeny ireo fepetra sy fepetra, dia manaiky ny fampiasana ny orinasa mampiasa ny cookies mifanaraka amin'ny fepetra voalazan'ny politika momba ny fiainana manokana momba ny fiarovana / fiarovana.
Lisitry ny fampiasana tranokala
Raha tsy misy fanamarihana manokana, ny General Corporate Services, Inc. (orinasa Nevada) sy / na ny nahazoan-dàlana dia mampiasa ny marika Companies Incorporated ary manana zo amin'ny zo ara-tsaina ao amin'ny tranokala sy ny fitaovana ao amin'ny tranonkala. Eo ambany fahazoan-dàlana eto ambany, voatahiry ireo zo ara-tsaina rehetra ireo.
Azonao atao ny mijery, maimaim-poana fotsiny amin'ny tanjona kendry, ary manonta pejy na votoaty hafa avy amin'ny tranonkala noho ny fampiasanao manokana, raha misy ireo fepetra voalaza etsy ambany ary any amin'ny toeran-kafa ao anatin'io fepetra sy fepetra io.
Tsy tokony famoahana fitaovana avy amin'ity tranonkala ity (tafiditra ao anatin'izany ny repoblika amin'ny tranokala hafa); mivarotra, hofan-trano na famoahana licence amin'ny tranokala; asehoy izay zavatra rehetra ao amin'ny tranokalan'ny olona; mamoaka, duplicate, kopie na fanararaotan-javatra hafa ao amin'ity tranonkala ity ho an'ny tanjona ara-barotra; Hanova na manova zavatra hafa ao amin'ny tranokala; na fametrahana fitaovana fanontana avy amin'ity tranonkala ity afa-tsy ny votoatiny, raha misy, manokana sy mazava ho azy ho an'ny famerenam-bidy.
Raha toa ny votoatina natao ho an'ny famerenam-pahefana, dia azo averina amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana alalana avy amin'ny mpanatanteraka ao amin'ny General Corporate Services, Inc. any amin'ny orinasa Nevada.
Fampiasana azo ekena
Tsy tokony hampiasa ity tranokala ity amin'ny fomba rehetra izay mahatonga, na mety hiteraka, manimba ny tranokala na ny famoizana ny fahafahana na ny fidirana amin'ny tranokala; na amin'ny fomba rehetra, izay tsy ara-dalàna, tsy ara-dalàna, manendrikendrika na mampidi-doza, na mifandraika amin'ny tanjona na fihetsika tsy manara-dalàna, tsy ara-dalàna, mamitaka na manimba.
Tsy tokony hampiasa an'ity tranonkala ity ianao mba handikana, hividy, hametrahana, handefa, handefa, hampiasa, hamoahana na hizara fitaovana izay misy (na mifandray amin'ny) spyware rehetra, virus virtoaly, soavaly Trojan, kankana, logiciel, rootkit na hafa rindrambaiko solosaina ratsy.
Tsy tokony hanao fitakiana angon-drakitra momba ny angon-drakitra na automatique ianao (anisan'izany ny fikojakojana fitrandrahana, ny angon-drakitra momba ny angon-drakitra, ny angon-drakitra sy ny angon-drakitra) na amin'ny fifandraisana amin'ity tranonkala ity.
Tsy tokony hampiasa ity vohikala ity handefa na handefasana fifandraisana ara-barotra tsy misy fangarony.
Tsy tokony hampiasa ity tranokala ity amin'ny tanjona rehetra mifandraika amin'ny varotra tsy misy ny fanekena an-tsoratra ny General Services.
Ny fidirana amin'ny faritra sasany amin'ity tranonkala ity dia voafetra. Ny General Corporate Services dia miaro ny zo hamerana ny fidirana amin'ny faritra hafa amin'ity tranonkala ity, na ity tranonkala iray manontolo ity, amin'ny fisainan'ny General Corporate Services.
Raha ny General Corporate Services dia manome anao ny ID sy ny tenim-pahefana hahafahanao miditra amin'ny faritra voafetra ao amin'ity tranokala ity na ny votoatiny hafa na ny tolotra hafa, dia tsy maintsy miantoka fa ny tsiambaraton'ny mpampiasa sy ny tenimiafina dia voatazona tsiambaratelo.
Ny sampandraharahan'ny Corporate Services dia mety manaisotra ny ID sy ny teninao amin'ny fisoratana anarana amin'ny General Corporate Services raha tsy misy filazana na fanazavana.
Ao anatin'ireny fepetra sy fepetra ireny, ny "votoatin'ny mpampiasa" dia midika hoe fitaovana (anisan'izany ny lahatsoratra tsy voafetra, sary, horonam-peo, fitaovana lahatsary ary horonan-tsary) izay adidinao amin'ity tranonkala ity, na inona na inona antony.
Manome tolotra manerantany tsy an-kiato manerantany, tsy miangatra, tsy manavakavaka, tsy manan-kery ianao amin'ny sampana General Services mba hampiasa, hamoahana, hanamboatra, hamoahana, handika ary hizara ny votoatin'ny mpampiasa amin'ny fampahalalam-baovao misy na ho avy. Azonao atao ihany koa ny manome alalana amin'ny sampan-draharaham-panjakana misahana ny zon'ny mpamorona ny zon'ny mpamorona zon'ireo zo ireo, ary ny zo hitondra hetsika ho fandikana ireo zo ireo.
Ny votoatin'ny mpampiasa anao dia tsy tokony ho tsy ara-dalàna na tsy ara-dalàna, tsy tokony hanohintohina ny zon'ireo antoko fahatelo, ary tsy tokony ho afaka hampitsahatra ny asany ara-dalàna na manohitra anao na ny General Services na ny antoko fahatelo (isaky ny fehezin'ny lalàna rehetra) .
Tsy tokony hanaiky ny votoatin'ny mpampiasa amin'ny tranonkala izay efa nisy na efa nisy na iza na iza na iza na iza na iza, na inona na inona mety hitranga mety hitranga na ny zava-misy, na ny fitarainana hafa mitovy amin'izany.
Ny General Corporate Services dia manana zo hanova na hanaisotra izay zavatra rehetra natolotr'ity tranonkala ity, na voatahiry ao amin'ny servisy Jeneraly, na nampiantrano na navoaka tao amin'ity tranonkala ity.
Na dia eo aza ny zon'ny orinasam-pandraharahana ankapobeny, araka ny fepetra sy fepetra mifandraika amin'ny votoatin'ny mpampiasa, ny General Corporate Services dia tsy manara-maso ny fanekena ny votoaty toy izany, na ny famoahana izany votoaty izany, ity tranonkala ity.
Ity tranonkala ity dia nomena "toy izany" tsy misy fanehoana na fanomezan-toky, maneho na miseho. Ny sampan-draharahan'ny Corporate General dia tsy mampiseho fisehoana na fiantohana mifandraika amin'ny tranonkala na ny vaovao sy ny fitaovana omena ao amin'ity tranonkala ity.
Raha tsy manavakavaka ny fomban-drazana voalaza etsy ambony, ny General Corporate Services dia tsy manome antoka fa ity tranonkala ity dia ho azo atao foana, na azo atao; na ny vaovao ao amin'ity tranonkala ity dia feno, marina, marina na tsy mamitaka.
Tsy misy na inona na inona eto amin'ity tranonkala ity, na natao hanamboarana, toro-hevitra amin'ny karazana. Raha mila torohevitra ianao mikasika ny raharaha ara-dalàna, hetra, ara-bola na ara-pahasalamana dia tokony hanatona mpitsabo matotra ianao.
Ny sampandraharaha misahana ny orinasam-pifandraisan-davitra dia tsy tompon'andraikitra aminao (na eo ambanin'ny lalàna momba ny fifandraisana, ny lalàn'ny fiaramanidina na ny hafa) mifandraika amin'ny votoatin-javatra, na fampiasana, na tsy misy ifandraisany amin'ny tranonkala ity:
raha toa ka ny tranonkala dia tsy nomena maimaim-poana, noho ny fahaverezana mivantana;
ho an'ny fatiantoka indraindray, manokana na vokatr'izany; na
ho an'ny fatiantoka ara-barotra, ny fahaverezan'ny fidiram-bola, ny fidiram-bola, ny tombom-barotra na ny vola tahiry, ny fahaverezan'ny fifanarahana na ny fifandraisana ara-barotra, ny fahaverezan'ny laza na ny sitra-po, ny fahaverezana na ny kolikoly ny vaovao na ny angona.
Ireo fetra takiana amin'ny tompon'andraikitra dia azo ampiharina na dia efa nanoro hevitra momba ny mety ho fahaverezana aza ny General Corporate Services.
Tsy misy na inona na inona ato amin'ity lisitry ny vohikala ity dia hanafoana na hamerana ny fiantohana rehetra voatanisa amin'ny lalàna fa tsy ara-dalàna ny manilika na mametra izany; ary tsy misy na inona na inona ato amin'ity tranonkala ity dia manafoana na mametra ny andraikitry ny General Corporate Services amin'ny lafiny iray:
fahafatesana na faharatrana manokana vokatry ny tsy firaharahan'ny General Corporate Services; ny hosoka na ny fanaovana hosoka amin'ny ankapobeny avy amin'ny General Corporate Services; na zavatra izay tsy ara-dalàna na tsy ara-dalàna ho an'ny General Corporate Services mba hanilihana na hamerana, na hanandramana na hanipika na hanilihana na hamerana, ny andraikiny.
Amin'ny fampiasana an'ity tranonkala ity, manaiky ianao fa ny fanararaotana sy ny fetran'ny andraikitra napetraka ato amin'ity adiresy vohikala ity dia azo ekena.
Raha tsy mihevitra ianao fa mahay mandanjalanja, tsy tokony hampiasa ity vohikala ity ianao.
Manaiky ianao fa, amin'ny maha-tompon'andraikitra ny famerana ny orinasa, General Corporate Services, Inc., orinasa Nevada, dia liana amin'ny famerana ny andraikitry ny manampahefana sy ny mpiara-miasa aminy. Manaiky ianao fa tsy hitondra fitarainana manokana amin'ny manampahefana, mpiandraikitra na mpiara-miasa amin'ny General Corporate Services ho fanajana ny fahavoazana rehetra mety hitranga amin'ny tranonkala.
Raha tsy misy fanavakavahana ilay fehintsoratra voalaza etsy ambony dia manaiky ianao fa ny fetran'ny safidy sy ny tompon'andraikitra voarain'ity disclaimer ity dia hiaro ny mpiandraikitra, ny mpiara-miasa, ny mpandraharaha, ny tolotra, ny mpandimby, ny tompon'andraikitra ary ny mpiantoka, Inc.
Fepetra tsy azo ovàna
Raha toa ny fehezan-tsokajin'ity tranonkala ity dia, na hita fa tsy voafehin'ny lalàna manan-kery, dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fampiharana ny fepetra hafa amin'ity adiresy ity.
Manome alalana ny Sampan-draharaham-pirenena misahana ny Fifandraisan-davitra ny Jeneraly, ary manaiky ny hitazomana ny mpiandraiki-draharaha misahana ny orinasam-pifandraharaham-panjakana amin'ny alàlan'ny fatiantoka, ny fahavoazana, ny fandaniana, ny fandaniana ary ny fandaniana (anisan'izany ny fandaniana ny fandaniana ara-dalàna sy ny sandan'ny sampan-draharaha misahana ny Corporate General ho an'ny antoko fahatelo amin'ny fametrahana fanambarana na fifandirana amin'ny toro-hevitr'ireo mpanolotsaina ara-dalàna ny sampandraharaha misahana ny fikarakarana ny orinasam-panjakana) izay naorin'ny sampan-draharaha misahana ny orinasam-pifandraharaham-panjakana rehetra vokatry ny fandikana anao amin'ny fepetra rehetra momba ireo fepetra sy fepetra ireo, na avy amin'ny filazana fa nandika ny fepetra momba ireo fepetra ireo ianao ny toe-piainana.
Fandikana ireo fepetra sy fepetra ireo
Raha tsy manavakavaka ny zon'ny hafa manerantany ny zon'ireo mpiara-miombon'antoka amin'izao fepetra izao, raha mandika ireo fepetra sy fepetra ireo ianao, dia mety hanao hetsika toy ny General Corporate Services ny General Services raha toa ka mandamina ny sazy ny General Services, anisan'izany ny fampiatoana ny fidirana amin'ny tranonkala, mandràra anao tsy hiditra amin'ny tranonkala, fanakanana ordinatera mampiasa ny adiresinao IP amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny tranonkala, mifandray amin'ny mpanolotra aterineto anao hangataka ny hanakànany ny fidirana amin'ny tranokalam-pifandraisana sy / na hampanao fitsarana manohitra anao.
Ny Sampandraharaha misahana ny Corporate General dia afaka mandinika ireo fepetra sy fepetra takiana isaky ny fotoana. Ny fepetra voalazan'ny fehezan-dalàna dia hampiharina amin'ny fampiasana ity tranokala ity hatramin'ny vaninandro namoahana ny volavolam-panitsiana voamarina ao amin'ity tranonkala ity. Azafady avereno matetika ity pejy ity mba hahafantaranao tsara ny dikan-teny misy ankehitriny.
Ny sampandraharahan'ny Corporate General dia mety handefasana, fifanarahana na fifanarahana amin'ny zon'ny orinasam-pandraharahana ankapobeny sy / na ny fepetra araka ny fepetra sy fepetra tsy misy fampahafantarana anao na ny fahazoana ny fanekenao.
Mety tsy handefasana, fifanarahana am-bava na tsy mifanaraka amin'ny zonao sy / na ny adidy amin'ny fepetra sy fepetra.
Raha misy fepetra amin'ireto fepetra sy fepetra ireto dia hofaritan'ny fitsarana na ny tompona hafa manam-pahefana ho tsy ara-dalàna sy / na tsy misy fepetra, dia mbola hitohy ny fepetra hafa. Raha misy fepetra tsy ara-dalàna sy / na tsy misy fepetra azo ekena na azo ekena raha toa ka voafafa ny ampahany aminy, dia ho voafafa ny ampahany, ary mbola hitohy ny ambiny.
Ireo fepetra sy fepetra ireo dia ny fifanarahana manontolo misy anao sy ny General Services amin'ny fifandraisanao amin'ny fampiasanao an'ity tranonkala ity, ary manafoana ny fifanarahana rehetra teo aloha mikasika ny fampiasanao an'ity tranonkala ity.
Lalàna sy Fitsarana
Ireo fepetra ireo dia fehezin'ny lalàna sy fehezan-dalàna mifanaraka amin'ny lalàn'i Floride, ary ny fifanolanana mifandraika amin'ireo fepetra sy fepetra ireo dia ho eo ambany fahefan'ny fitsarana tokana ao amin'ny Broward County, Florida.
Famoahana sy fanomezan-dàlana
Ny anarana feno ny General Corporate Services dia General Corporate Services, Inc.
Ny sampandraharaha misahana ny Corporate General dia voasoratra ao Nevada.
Ny adiresy navoakan'ny Corporate Services dia ny 701 S Carson St., Ste. 200, Carson City, NV 89701
Ny adiresy mailaka dia 23638 Lyons Ave. #223, Santa Clarita, CA 91321.
Azonao atao ny mifandray amin'ny General Corporate Services amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny info@companiesinc.com.
Orinasan-tserasera sy orinasa
Copyright © 2019 Companiesinc.com | Zo rehetra voatokana